गुल्मीमा चट्याङ् लागेर एकको मृत्यु, आठ घाइते : RajdhaniDaily.com
Home प्रमुख गुल्मीमा चट्याङ् लागेर एकको मृत्यु, आठ घाइते
गुल्मी । गुल्मीमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका –४ दजाकोटकी १८ बर्षिय करिश्मा गाहाको चट्याङ् लागेपनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
दजाकोटका उजिर गाहा र भिमश्री गाहाको घरमा बिहिबार राति चट्याङ परेको थियो । चट्याङ्ले अन्य आठजना घाइते भएका छन् । ६३ बर्षिया उजुर सिहं गाहा, ६२ बर्षिय तथिकला गाहा, ३७ बर्षिया तुल बहादुर गाहा, ३२ बर्षिय जुनी गाहा घाइते भएका छन् ।
त्यसैगरी १४ बर्षिय मेलिना गाहा, आठ बर्षिया जोनित गाहा, ३३ बर्षिया चित्र बहादुर गाहा र २८ बर्षिय ज्योतिकला गाहा घाइते भएका छन् । घाइतेहरुलाई थप उपचारको लागि पाल्पा पठाइएको छ । घाइते सबैको अवस्था मध्यम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मीका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
गुल्मीमा चट्याङ् लागेर एकको मृत्यु
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको बेलामा पनि राजस्व छलीको शृंखला रोकिएको छैन । लकडाउनकै समयमा राजस्व छली गर्ने क्रममा कमी नआएपछि राजस्व...
Breaking News हुमाकान्त पोखरेल - February 1, 2021 0
Uncategorized हुमाकान्त पोखरेल - July 15, 2020 0
पोखरा । चितवनकी एक महिलालाई बलात्कार आरोपमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल हुल तथा दंगा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन, पोखरामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी...
Breaking News हुमाकान्त पोखरेल - November 9, 2020 0
Breaking News हुमाकान्त पोखरेल - August 29, 2020 0
अर्थ हुमाकान्त पोखरेल - November 29, 2020 0
प्रदेश हुमाकान्त पोखरेल - August 10, 2020 0
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - April 19, 2021 0
प्रदेश हुमाकान्त पोखरेल - September 1, 2020 0